को’रो’नाबाट ब: च्नको लागि डाक्टरका यी महतत्वपूर्ण सुझाव , हेर्नुहोस् – Krazy NepaL
को’रो’नाबाट ब: च्नको लागि डाक्टरका यी महतत्वपूर्ण सुझाव , हेर्नुहोस्
April 8, 2021 326
लगभग १ अरब १५ करोड जनसंख्या भएको चीनमा २ हजार बढीको मृ: त्यु भएको छ । कोरोना संक्रम’णबाट मृत् यु भएका अधिकांश व्यक्ति बुढाबुढी, क्यान्स’रजस्ता दीर्घ रो ग लागेका तथा रोगप्रतिरोधाʼत्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति छन् । कोरोना संक्रमणबाट अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरु सन्चो हुँदै फर्किने क्रम जारी छ । को रोना भाशइरस कमजोर खालको भाइरस प्रमाणित भएको छ । यसको मृ-त्यु दर १- २ % मात्र छ ।यसको औषधि तथा खोपको लागि अनुसन्धान भइरहेको छ । यो भाइ रस धेरै तातोमा सक्रिय हुन नसक्ने भएकाले गर्मी सुरु भएपछि नियन्त्रण हुने चीनको विश्वास छ ।
कोरोना भाइ रसको कारण सयौंको मृत्:यु भयो, हजारौं संक्र:मित भए तर करोडौं व्यक्तिहरु चिन्ता:ग्रस्त छन्। कोरोनाले भन्दा कोरोनाको कारण भइरहेको चि:न्ता, तना ब, अ सुरक्षा महसुस जस्ता मानसिक असरले दीर्घरो’गी वृद्धि हुने तथा मृत :कको संख्या बढ्ने देखिएको छ हामीकहाँ पाइने मास्कले कोरोनाको संक्रम’ण रोक्दैनन् । कोरोना भाइर:स टाउको, मास्कको बाहिरी भाग, कपडा, झोला, जुत्ता, हात आदि हुँदै घरघरमा फैलिन सक्छ । हाम्रा केहि बानीको कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च छ ।
“मान्छेतिर फर्केर खोक्ने, हाच्छ्यु गर्ने, औंलालाई मुख , नाक , आँखा , कानतिर लैजाने, हात नधोइ कानेकुरा समाउने – खाने आदि ।” कोरोना संक्रʼमणबाट बच्ने एउटा उपाय छ, त्यो हो – खल्तीमा, ब्यागमा ह्याण्ड स्यानिटाइजर वा अल्कोह:ल कन्टेन्ट स्यानिषटाइजर राख्ने, त्यसले पटक पटक हात सफा गर्ने । साबुन पानीले हात धोएर मात्र खाना खाने । को रोना सं क्रम:ण कसलाई छ जोखिम ? पढ्नुहोस् कोरोना भाइर:स फैलिएका देश फर्केकाहरु र त्यस्ता देशमा बस्ने व्यक्तिहरू ।
पर्यटक बस्ने होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्यासिनो तथा उनीहरुले प्रयोग गरेका सवारी साधनसंग सम्बन्धित । पर्यटकीय क्षेत्रमा काम तथा ब्यबसाय गर्नेहरु । कुकुर, बिराला, कुखुरा, परेवा लगायतका पशुपंक्षी पाल्ने तथा संगै रहने व्यक्तिहरु । – मा:सु का ट्ने, पकाउने, काँचै खाने व्यक्तिहरु । – हात नधोइ खाना खाने व्यक्तिहरु । – प्रत्येक पटक हात नधोइ बारम्बार सु र्ती खाने व्यक्तिहरु । – बालबालिका, बुढाबुढी, गर्भवती, सुत्के री, दी र्घ बिरामी तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरु। -सार्वजनिक यातायात, सपिंग मल, फ्लिम हल, विमानस्थल, अस्पताल, बिद्यालय / कलेज लगायत भीड हुने स्थानमा रहने व्यक्तिहरु ।
– हात नधोइ मुख, आँखा, नाक, कानमा छुने बानी परेका व्यक्तिहरु । – भीडभाडमा हिंड्दा सहि तरिकाले गुणस्तरीय मास्क ( एन ९५ ) प्रयोग नगर्नेहरु । र भेट हुँदा हात मिलाउने, हग गर्ने, चुम्ब न गर्ने बानी भएका व्यक्तिहरु , आदि । यो जोखिम विशेषगरी को रोना भा इरस फैलिएका राष्टहरुमा बढी हुन्छ , यद्यपी हामी सबै जना यसमा चनाखो भएर यो भाइ रस जोगिन सचेत हुनुपर्छ ।
Prev३० वर्ष काटेपछि महिलाले अनिवार्य गराउनुपर्ने यी ५ परी’क्षण : सबै महिला’ले पढ्नुहोला
Nextधनवान बन्नका लागि ध्यान दिनुहोस् मात्र यी चिज, जीवनमा कहिलै हुँदैन पैसाको कमी !
रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमणको कारण आइसियुमा
आँखामा अन्नो आएर सताउँछ ? यसरी गर्नुहोस् उपचार नत्र आँखामा संक्रमण हहुने खतरा!
एउटा अमलामा ३ वटा सुन्तलामा भन्दा बढी भिटामिन पाइन्छ जानी राखौ यसको फाइदाहरु